लमजुङ, एसएलसी र सहकारी सम्झनाहरु :: Sahakari Akhabar
देवदर्शन साकोसको १३औं साधारणसभा सम्पन्न
मनासलु सहकारीकाे २२औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
तपाईं हाम्रो सहकारी संस्थाको १४औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
बागेश्वरी सानाकिसान सहकारीमा नयाँ नेतृत्व
जिल्ला सहकारी संघ बागलुङको १३ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
सहकारी बैंकका सदस्यको खातामा १५ प्रतिशत लाभांश
सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर र वर्तमान अवस्था
सदस्यप्रति उत्तरदायी हुन सहकारीलाई मन्त्रीको आग्रह
सहकारीको संघ छ, विवरण छैन, विभागमा उजुरीको तयारी
सहकारी महासंघले पाँचलाख अनुदान दिएको श्रमिक सहकारीको कोप रेष्टुरेन्ट बिक्रीमा
२०७८ माघ ३ गते , सोमवार
लमजुङ, एसएलसी र सहकारी सम्झनाहरु
२०७७ जेष्ठ २६ गते , सोमवार Sahakari Akhabar
(२०५८ भदौ ६ गतेबाट नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि–नेफ्स्कून प्रवेश गर्नुभएका शिव अधिकारी सम्पूर्ण सहकारी वृत्तमा एउटा चर्चित नाम हो । नेफ्स्कूनको फिल्ड कार्यक्रम अधिकृतका रुपमा चितवन र नवलपरासी जिल्लाको लघुवित्त कार्यक्रम हेर्ने गरी आरम्भ भएको उहाँको सहकारी यात्रा आजसम्म अनवरत र अविश्रामित छ । वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत हुँदै हाल प्रशासन तथा समन्वय बिभाग प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुभएका अधिकारीले २०६४ साल जेठ ८ गतेदेखि करिब ९ महिना कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो ।
२०४८ साल चैत्र १६ गतेदेखि २०५१ साल जेष्ठ सम्म आफु अध्ययन गरेको र छिमेकी विद्यालयमा अध्यापन गर्नुभएका अधिकारीले २०५१ साल कार्तिक ३ गतेदेखि लगातर ४ वर्ष सहकारी सहायक भएर सेभ द चिल्ड्रन लमजुङ परियोजना, करिब ६ महिना डिप्रोक्स नेपाल नुवाकोटमा सहकारी अधिकृत, काम गरेका अधिकारीले २०५५ साल मंसिर २० गते बाट २०५८ साल भाद्र ५ सम्म अमेरिकी सहायता परियोजना अन्र्तगत प्याक्ट नेपालमा देशको मध्य र सुदुर पश्चिम क्षेत्रमा महिला शसक्तिकरण सम्वन्धी परियोजनामा समेत काम गर्नुभएको थियो ।
जीवनको उर्जाशील समय सहकारीमा आहुति गर्नुभएका अधिकारी आफुलाई आजको स्थानसम्म पुर्याउन जन्मस्थान लमजुङ, आमाबुबा, गुरुवर्ग, आफन्त र साथीहरुको ठूलो हात रहेको विश्वास राख्नुहुन्छ । २०२६ साल साउन ७ गते मंगलबार लमजुङको भार्तेमा जन्मिनुभएका अधिकारीको जन्मस्थान, मातापिता, गुरु र समवयी साथीहरुसँग जोडिएका केही रोचक प्रसङ्गहरु आजको पुस्ता र सहकारीकर्मीहरुका लागि पनि पक्कै प्रेरणादायी र मर्मस्पर्शी हुने ठानेर यहाँ समेटिएको छ । –सम्पादक )
प्रशासन तथा समन्वय विभाग प्रमुख, नेफ्स्कून
लकडाउनका कारण अहिले देशभरका ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थीहरु एसईई परिक्षामा सामेल हुन नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । यसबीच कहिले एसईई परिक्षा चाँडै भइहाल्ने र कहिले एसईइ खारेजी हुने खबरहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रमै अन्योल सृजना गरेको छ । एसईईको पक्ष विपक्षका समाचारहरु अनलाईनमा हेर्दै र पढ्दै गर्दा म भने ३५ वर्षअघिको सम्झनामा बहकिन पुगेछु ।
ठीक ३५ वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् २०४२ साल जेठ २६ मैले एसएलसीको फलामे ढोका उत्तीर्ण गरेको थिए । एसएलसीको नतिजा अघिल्लो दिन साँझ सार्वजनिक भएपनि आफुले थाहा पाएको आजकै दिन थियो । आफु उत्तीर्ण भएको समाचारले खुशी थाम्न नसकेको दिन (क्षण) थियो आज । ती दिन सम्झदाँ आज पनि मन रोमाञ्चित हुन्छ । सम्झनामा ताजै छ–लमजुङ जिल्लाको भार्ते जनमिलन भन्ज्याङस्थित मेरो प्यारो विद्यालय सूर्योदय मा.वि ।
२०४२ साल जेष्ठ २५ गते शुक्रवार साँझ एसएलसी परिक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको थियो । मैले भने भोलीपल्ट अर्थात् जेष्ठ २६ गते शनिवार बिहान ७ बजेको रेडियो नेपालको नियमित प्रसारण अन्तर्गतको समाचार (समाचारवाचक दुर्गानाथ शर्मा जो दिवंगत भइसक्नुभयो) बाट मात्र थाहा पाएँ । समाचारले स्वाभाविक रुपमा खुल्दुली बढायो । नतिजा के भयो भनेर निक्कै छटपटी भयो । त्यतिबेला अहिले जस्तो गाउँमा सञ्चार सुविधा थिएन । गाउँभर हल्ला खल्ला मच्चियो, रिजल्ट भयो भनेर । छिमेकी देउराली गाउँको ईश्वरमणि अधिकारी म सँगै परिक्षामा सहभागी हुनु भएको थियो । उहाँ एकाबिहानै भोटे ओडार पुगी गोरखापत्र हेरेर नतिजा लिइ आइसक्नु भएको थियो । गोरखापत्र रातारात भेटेओडार ल्याइपुर्यायको रहेछ । इश्वरमणी सिधै मेरो घरको उपल्लो बाटो राताम्य अविर दलेर बिहान करिब साढे ९ बजेतिर आइपुग्नुभयो । मलाई बाटो बाट बोलाउँदै “शिव, तिमी पनि पास भएछौं यार” भन्दा म खुसीले तिन वित्ता उफ्रेको थिए । त्यो पनि एक पटक मात्र हो र धेरै पटक उफ्रेको याद अझै ताजै छ ।
७०० पूर्णाङ्कको एसएलसी परिक्षा दिने हाम्रो पहिलो व्याच जिल्लास्तरीय नतिजाको प्रतिशतको आधारमा दोस्रो हुन सफल भएको थियो । व्याचमा उमेरका हिसाबले म सबैभन्दा कान्छो थिए । त्यसबेला जन बिकास मा.वि बेशिसहर लमजुङ एउटा मात्र परिक्षा केन्द्र थियो जसको केन्द्राध्यक्ष श्रीप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । हामीमध्ये कति जनालाई एसएलसी वा एसईईको परिक्षाकेन्द्रका केन्द्राध्यक्षको नाम थाहा छ ? यो विषय स्मरणशक्तिसँग पनि जोडिएर आउँछ । हाम्रा ज्ञानका दायराहरु हिजोआज संकुचित भएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।
हिजोआजको जस्तो थिएन त्यो समय । त्यतिबेला एसएलसीको महत्व, पास हुनुको खुसी र त्यसले आफ्नो व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभावको आयातनमा धेरै अन्तर थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । दुर्गम जिल्लामा अभावका बीच दुःख गरेर एसएलसी पास गर्नुको खुसी शब्दमा अवर्णनीय छ । सूर्योदय माध्यमिक बिद्यालयबाट एसएलसीको दोश्रो व्याच भएपनि परिक्षा उत्तीर्ण गर्ने हामी पहिलो व्याच थियौं । ७०० पूर्णाङ्कको एसएलसी परिक्षा दिने हाम्रो पहिलो व्याच जिल्लास्तरीय नतिजाको प्रतिशतको आधारमा दोस्रो हुन सफल भएको थियो । व्याचमा उमेरका हिसाबले म सबैभन्दा कान्छो थिए । त्यसबेला जन बिकास मा.वि बेशिसहर लमजुङ एउटा मात्र परिक्षा केन्द्र थियो जसको केन्द्राध्यक्ष श्रीप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । हामीमध्ये कति जनालाई एसएलसी वा एसईईको परिक्षाकेन्द्रका केन्द्राध्यक्षको नाम थाहा छ ? यो विषय स्मरणशक्तिसँग पनि जोडिएर आउँछ । हाम्रा ज्ञानका दायराहरु हिजोआज संकुचित भएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ । एसएलसी उत्तीर्ण हुनेमा म र ईश्वरमणि अधिकारीसँगै बामदेव अधिकारी, तेजनारायण अधिकारी र हरि बहादुर अधिकारी हुनुहुन्थ्यो ।
हाल महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सह–सचिव बामदेव अधिकारी हामी चारै जनाको काका र अरु ३ जना मेरा दाजुहरु हुनुहुन्थ्यो । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका उप प्राध्यापक ईश्वरमणि अधिकारी गीत, कला, साहित्य, हाईकु, गजलमा बिशेष रुचि राख्ने ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । पोखरेली युवा साँस्कृतिक परिवारको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत उहाँले सम्हालिसक्नु भएको छ । इश्वरमणि अहिले गणित बिषयमा विद्यावारिधिको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ, भने उहाँका २ भाइहरुले पनि अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरिसक्नुभएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षण सेवाबाट अवकास प्राप्त तेजनारायण अधिकारी पनि कला, साहित्य, कविता, लेखन र वाचनमा बिशेष रुचि राख्नुहुन्छ । लमजुङे साहित्य समाजको अध्यक्ष भईसक्नु भएका अधिकारीले प्राकृतिक चिकित्सालाई पेशा बनाउनुभएको छ भने लमजुङ जिल्लामा राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि बिशेष ख्याति आर्जन गर्नुभएको छ । हरि बहादुर अधिकारी भारतीय सैनिक बाट अवकाशप्राप्त, सामाजिक बिचारका धनी र अत्यन्तै मनकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ । मैले पनि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अनुभव बटुल्दै नेफ्स्कून जस्तो बिशिष्ट संस्थामा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुलाई उपलब्धि नै ठानेको छु । लमजुङको एउटा दुर्गम गाउँको विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे पनि हामी ४ जनानै आ–आफ्ना क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्नुका पछाडि त्यो माटोको आर्शीवाद मुख्य कारण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जहाँ गएपनि आफ्नो धरातल बिर्सिनु हुन्न र सदैव पछाडि फर्केर पनि हेर्नुपर्छ भन्ने पाठ यसले हामी सबैलाई सिकाउँदछ ।
स्मरण ( जीवनका पाना पल्टाउँदा )
त्यतिबेला एसएलसी उत्तिर्ण भएको खुशियालीमा अभिभावक भेला आयोजना गरी हामीलाई गरिएको अवीरमाला अहिले शब्दमा बयान गर्न कठिन छ । त्यस समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मेरा पिता पशुपति अधिकारी र प्रधानाध्यापक वासुदेव शर्मा अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । मेरा पिता पटक पटक गरेर ३१ वर्ष विद्यालय व्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । जीवनमा अरुका लागि हरबखत सहयोग गर्न तयार रहुनपर्ने र सहकारीमय बनाउनुपर्ने प्रेरणा पनि बुबाबाट मिलेको मैले अनुभव गरेको छु । त्यही अबिर लगाउँदै गर्दा मेरा पिताजीले त्यसलाई केबल अबिर मात्र नभएर माटोको आर्शिवाद भएको र त्यसमा पसिना पनि मिसिएका कारण कहिल्यै भुल्न नहुने प्रतिक्रिया दिएको आज म र त्यस घटनाका साक्षीहरुले बताइरहँदा फेरि एक पटक माटोको मायाले भक्कानिएँ । मैले माटोको लागि जे जति गर्न सके त्यो निक्कै कम छ किनभने जति गरेपनि माटोको मायाबाट अघाइदैन । सहकारी क्षेत्रमा समुदायमा जुटिरहने हामीहरुले आफ्नो माटोको आर्थिक, सामाजिक र सांँस्कृतिक समृद्धि र विकासमा सदैव तन मन र धनले लागिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तत्कालिन प्रधानाध्यापक वासुदेव शर्मा अधिकारी र हाम्रो खुसीमा साथ र सहभागिता जनाउने कतिपय अनुहारहरु आज भौतिक रुपमा यस धर्तीमा नरहेपनि उहाँहरुप्रति श्रद्धासुमन समेत अपर्ण गर्न चाहन्छु । अहिले जेष्ठ नागरिकका रुपमा गाउँघरकै संरक्षणमा जुट्नुभएका त्यस समयका पौरखी युवाहरुप्रति पनि नमन गर्न चाहन्छु । गाउँको विकास निर्माण लगायत हरेक क्रियाकलापमा सधैं सशरीर उपस्थित हुन नसकेपनि लमजुङको माया, भावना र विकासका अभिायनसँग सदा अत्यन्त सन्निकट छु र पाउँछु पनि । आफु जन्मेको ठाउँ, गाउँ, मातापिता र गुरुहरुलाई सदैव सम्मान व्यक्त गर्न आखिर मैले लमजुङबाटै त सिकेको हो नि । सरल स्वाभाव र सहयोगी भावनाको विजारोपण त्यही गाउँले गरायो मलाई । सबैलाई सक्दो सहयोग गर्नु पर्ने बिचारको जन्म लमजुङमै भयो ।
त्यही लमजुङको माटोको देन र अभिभावक अनि गुरुवर्गको आर्शिवाद हुनुपर्छ आजसम्म पनि एक हजार सम्मको गुणा मुखैबाट गर्न सक्षम छु । कक्षा ५ देखि नै साना तिना गुणाका लागि क्यालकुलेटरमा औला थिच्न अभ्यस्त अहिलेको पुस्तालाई यो अचम्म लाग्न सक्छ । आफ्नो जीवनका मुख्य घटना र परिघटनाहरुका मिति मात्र होइन धेरै जनाको फोन र मोवाईल नम्बर मुखाग्र छ । सबै मिति, स्थान र व्यक्तिका नामहरु मलाई यतिका वर्षपछि पनि कण्ठ छ । यी नीजि संस्मरणहरु कम्प्युटरमा लेख्ने क्रममा पुराना डायरीका पानाहरु पल्टाउन परेन । आजका पुस्ता र सहकारीकर्मीहरुले यी कुरामा बिशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
सहकारी क्षेत्र आफै पनि समुदायमा आधारित भएकाले पनि हुनसक्छ यसले मेरो सम्पर्कको दायरा फराकिलो बनाउन मलजल गर्यो। अफ्ठ्यारोमा परेकाहरुको सहयोगका लागि सदा तत्पर रहने र अरु सँग पनि सहकार्य र सहयोग माग्न पछि नपर्ने स्वाभाव विकासको आधारशीला निर्माणमा प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग पुर्याउने सबैलाई पुनः एकपटक उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सहकारी कर्मक्षेत्रमा थप सक्रिय भएर लाग्ने प्रण समेत गर्दछु ।
एउटा रमाइलो किस्सा पनि यहाँ जोड्न मन लाग्यो । सुर्योदय माविमा मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो धुव्र बहादुर कुँबर । त्यो समयमा उहाँले मलाई “कम्प्युर” भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला कम्प्युरटको विषयमा लमजुङको गाउँमा रहेका हामी विद्यार्थीलाई त परै जाओस् धुव्र सरलाई समेत केही अत्तोपत्तो थिएन । यद्यपि, उहाँले कहाँ बाट त्यो नाम मलाई दिनुभयो । हिजोआज धुव्र सरसँग भेट हुँदा त्यो प्रसङ्ग कोट्याउँदै, “त्यतिबेला मलाई कम्प्युटर भनेको के हो, यसले के काम गर्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने समते थाहा थिएन तर मैले तिमीलाई किन र कसरी त्यो नामले बोलाए आफै छक्क पर्छु” भन्दा हामी दुबैजना आश्चार्यमिश्रित हाँसो हाँस्छौं । हुनत जीवनमा केही नमीठा र दुःखका दिन पनि आए तर यस्ता अनेकन मीठा रोचक प्रसङ्गहरुलाई मात्र याद गरेर ती बाट शिक्षा लिदैं अघि बढ्ने बानीमा पक्कै धुव्र सरको देन पनि मिसिएको छ भन्ने लाग्छ ।
विद्यालयकाल देखि डायरी व्यबस्थापन गर्ने कलाले आजसम्म निरन्तरता पाएको छ । माता पितालाई अत्यन्त सम्मान गर्ने बानीका कारण धेरैले कलियूगका श्रवण कुमार भनी बोलाउँदा आफ्नो भन्दा बढी गर्व माता पिताको लाग्ने भावनाको विकासमा आखिर त्यही माटो र त्यहाँका आदरणीय व्यक्तित्वहरुको देन न लुकेको छ । आजको पुस्ताले यसलाई दन्त्यकथा मान्न सक्छ । सहयोगको याचनमा सकेसम्म “हुँदैन” कसैलाई नभन्ने बानीकै कारण हुनसक्छ जन सम्पर्कमा विस्तारले नयाँ उचाई कायम गर्न सकेको ।
सहकारी क्षेत्र आफै पनि समुदायमा आधारित भएकाले पनि हुनसक्छ यसले मेरो सम्पर्कको दायरा फराकिलो बनाउन मलजल गर्यो । अफ्ठ्यारोमा परेकाहरुको सहयोगका लागि सदा तत्पर रहने र अरु सँग पनि सहकार्य र सहयोग माग्न पछि नपर्ने स्वाभाव विकासको आधारशीला निर्माणमा प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग पुर्याउने सबैलाई पुनः एकपटक उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सहकारी कर्मक्षेत्रमा थप सक्रिय भएर लाग्ने प्रण समेत गर्दछु ।
जीवन र जगतको अनुपमम स्वाद लिन सहकारीकर्म भन्दा उत्तम अरु केही छैन । त्यसका लागि जागिर नै आवश्यक नभएपनि मन र मस्तिष्कमा सहकारी भावना ओतप्रोत हुनुपर्दछ अनि मात्र हामी समाज र राष्ट्र विकासमा भूमिका खेल्न सक्छौं । त्यसको प्रथम पाइलाका रुपमा एसईईको अन्योलमा रहनुभएका सबै विद्यार्थीहरुलाई पनि उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दछु । जय मातृभूमि, जय जन्मभूमि, जय माता पिता, जय गुरुवर्ग र जय सहकारी ।
नेफ्स्कूनमा ‘प्रकाश’ ...
२०७७ जेष्ठ २६ गते , सोमवार
सहकारीमा महिला व्यबस्थापकीय नेतृत्व र चित्रा सुब्बा ...
नेफ्स्कूनका संचालकको ‘लकडाउन’ स्टेशन ...
हातेमालोको एक लाख रुपैया ...
विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर शीर्ष खेलाडी, प्रिन्स दाहाललाई जेष्टले सम्मान गर्ने